AC MILAN VS INTER MILAN: Shaxda & safafka ay galabta kusoo geli karaan | Hadalsame Media
Home Ciyaaraha AC MILAN VS INTER MILAN: Shaxda & safafka ay galabta kusoo geli...
AC MILAN VS INTER MILAN: Shaxda & safafka ay galabta kusoo geli karaan
FUSSBALL INTERNATIONAL SERIE A 23. Spieltag SAISON 2019/2020 Inter Mailand - AC Mailand 09.02.2020 Zlatan Ibrahimovic li, AC Mailand und Romelu Lukaku re, Inter Mailand *** FOOTBALL INTERNATIONAL SERIES A 23 Matchday SEASON 2019 2020 Inter Milan AC Milan 09 02 2020 Zlatan Ibrahimovic li, AC Milan and Romelu Lukaku re, Inter Milan
(Milano) 21 Feb 2021 – Waxaa galabta kulan aad u adag Derby Della Madonnina ku ballansan kooxaha camaaliqooyinka ah ee deriska ah: AC Milan vs Inter Milan.
Dhanka Milan: Bennacer iyo Mandzukic ayaa laga quustay inay ciyaartan ka qayb galaan dhaawac muruqa ah dartii. Kessie ayaa sita furaha khadka dhexe waxaana wehlinaya Tonali. Weerarka baalasha waa Leao iyo Rebic oo ka dambeeya Ibrahimovic. Waxaa soo noqday Diaz.
Dhanka Inter: Waxaa markale maqan Sensi, oo dhaawac muruqa ah la daalaa dhacaya. Conte ayaa se dib u helay raacaha adag ee Vidal, oo dhaawac jilibka ah kasoo doogey wuxuuna ku bilaabmayaa kaydka. Waxaa kalsooni daqiiqadda 1-aad ah haysta Eriksen iyo Perisic.
Previous articleMaraykanka oo bahdilkii 2-aad la damacsan dhaxal-sugaha Maxamed Bin Salmaan (Waa maxay?)
Next article”Durayga Covid-19 looma adeegsan karo marmarsiinyo lagu diido xorriyadaha asaasiga ah!” – Maraykanka oo soo saaray farriin dhega hadal ku ah DF